10 Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 19/02/2021)
3 ora na 8 ora – Dia lamasinina dia toerana mety indrindra amin'ny torimaso mahasalama. Raha matetika ianao no manana olana amin'ny torimaso amoron-dalana, ny 10 torohevitra momba ny torimaso anaty lamasinina dia hahatonga anao hatory toy ny zazakely. Manomboka amin'ny zavatra ilaina amin'ny dia ny fiaran-dalamby mankany amin'ny toro-hevitr'i insider amin'ny toerana tsara indrindra ho an'ny nofy mamy amin'ny fiaran-dalamby rehetra, manomboka amin'ny dia mankany amin'ny nofy mahafinaritra isika!
1. Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina: Mitondrà lamba firakotra
Matetika ny sakay ny toetr'andro amin'ny lamasinina, ary raha manana lava na dia lamasinina alina mialoha, ho vonona. Tokony hahatsapa ho miala sasatra tanteraka ianao ary hiala sasatra amin'ny dianao, ary lamba firakotra maivana no mety ho valin'ny fitsangantsanganana fiaran-dalamby mafana indrindra.
Mba hisorohana ny alina tsy misy torimaso ary mangovitra amin'ny dianao tsy andrasanao na ny AC fotsiny, tokony manangona lamba firakotra foana ianao. Na inona na inona vanim-potoana any ivelany, manakaiky ny ririnina hatrany amin'ny lamasinina. Noho izany, ny mitondra lamba firakotra dia iray amin'ireo tamponay 10 torohevitra momba ny torimaso anaty lamasinina. Ny fandokoana ao ambanin'ny lamba firakotra dia handefa anao hatrany amin'ny tany nofinofy.
2. Apetraho ao amin'ny Spotify ny Playlist milamina
Ny feon-kira mampitony ao an-tsofinao dia toy ny lullaby rehefa mitabataba na feno olona ilay trano. Ary noho izany, tokony hanomana playlists vitsivitsy ao amin'ny Spotify ianao hahazoana antoka fa ny mozika irery no hany henonao. Amin'izany ianao dia ho voaro amin'ny fandrika na amin'ny resaka ataon'ny mpandeha eo akaikinao.
Feo natiora, playlists vibes miala voly, na feo avy amin'ny mpanakanto tianao, dia ny safidy tsara indrindra amin'ny playlist ho an'ny torimaso tsara amin'ny lamasinina. Ny mozika dia iray amin'ireo 10 fomba tsara indrindra hatoriana amin'ny lamasinina, fohy na dia lavitra.
3. Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina: Mitondrà ondana vozony tsy azo volena
Tsy misy ratsy kokoa noho ny mifoha amin'ny vozona maharikoriko sy mafy hatoka. Ary noho izany, ondana vozona tsy azo kosehina dia ilaina ho an'ny lamasinina. Atỳ, tohana ny tendanao, ary hifoha amin'ny torimaso mamy ianao, miaraka amin'ny tsiky eo amin'ny tavanao.
Raha tsy izany, mety hampidi-doza anao ny manomboka traikefa nahafinaritra miaraka amin'ny hatoka henjana, ary tsy misy fomba fiderana ireo toerana vaovao sy hahazoana ny fomba fijery tsara indrindra.
4. Mitondrà headphones
tsara, headphone na sofina tsy misy feo dia misy isaky ny mandeha lisitra fitsangatsanganana. Ilaina ny headphones amin'ny dian'ny lamasinina, ary ireo lisitry ny lisitry ny Spotify amin'ny fitsangatsanganana bon.
Raha hadinonao ny findainao any an-trano na any amin'ny hotely, be ny magazay ao amin'ny gara. Avy afovoany sy gara akaiky be mankany amin'ireo gara kely sy ivelan'ny lalana, earphones no entana iray ho hitanao na aiza na aiza.
5. Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina: Akanjo tsara
Layers, landihazo, ary ny akanjo vita amin'ny tontolo iainana dia ilaina amin'ny mitaingina lamasinina. sary an-tsaina 8 ora maro amin'ny fiaran-dalamby amin'ny akanjo mafana mangidihidy na lobaka manify, fampanantenana ho an'ny alina tsy misy torimaso sy aretin'andoha nony maraina.
Mety tsy mahazo aina ianao rehefa manao pajama amin'ny lamasinina, fa ny mpampiofana sy ny pullover no akanjo fatoriana fiaran-dalamby lavorary. Ny fitafiana milamina dia iray amin'ny tampony 10 ny fomba fatoriana amin'ny lamasinina, ary manana ny dia tsara indrindra.
6. Mitondrà Saron-tava
Ny fitsangatsanganana iray hafa tena ilaina dia ny saron-tava farany. Mialà sasatra, manarona ny masonao ary tazomy mba tsy ho maivana ny masonao. Fantatra fa raha te hatory tsara ianao, tsy maintsy esorinao ny fanelingelenana manelingelina, ary esory ny tenanao amin'ny karazana jiro.
Raha sendra tsy mandeha anaty trano kely ianao, ary tsy hanana fifehezana ny jiro jiro, aza hadino ny manangona saron-tava. dia, tsy hanana ahiahy ianao raha manapa-kevitra ny hamaky ny alina ny mpandeha eo akaikinao na raha mazava loatra ny jiro amin'ny lamasinina.
7. Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina: Ataovy azo antoka ny fanananao
Kitapom-bola kely na kitapo eo ambonin'ny sorokao sy eo ambanin'ny sosona no fomba tsara indrindra hiarovana ny fanananao. Hamarino tsara fa ampy ny toerana ho an'ny pasipaoronao, poketra, finday, ary ny gadget hafa izay kasainao harahina.
Amin'izany no ahafahanao manana dia lavitra tsara sy tsy misy ahiahy, toy izay matory misokatra ny maso iray.
8. Mamandrika toerana eo afovoan'ny kalesy
Ny toerana tsara indrindra ho an'ny nofy mamy dia eo afovoan'ny kalesy. Ny anton'izany dia ny afovoany dia ampy lavitra amin'ny fidirana rehetra, raha sanatria ka misy fijanonana eny an-dalana. Ankoatry ny, ho voaro ianao ary ho lavitra ny trano fidiovana sy izay hanitra rehetra.
Na izany aza, raha mandeha lamasinina hatory ianao, tena azo inoana fa tsy hiatrika fanamby ianao. Izany dia vokatry ny zava-misy, fa lamasinina natory dia lamasinina A-B, tsy misy fijanonana eny an-dalana, ary noho izany, tsy misy fahatapahana.
9. Atsaharo ny telefaoninao
Amin'ny telefaona findainao izao tontolo izao. miaraka Fampiharana sy lalao tsy misy farany, ny fanamby lehibe indrindra dia ny mivoaka ary mametraka ny telefaoninao. Tena sarotra izany indrindra rehefa manao dia lavitra ianao, anaty lamasinina, tsy misy aleha.
Na izany aza, ny iray amin'ireo torohevitra farany ambony natory ho an'ny lamasinina dia ny fametrahana ny telefaoninao ao anaty kitapo, na koa amin'ny maody fanidina.
10. Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny lamasinina: Mitondrà fitaovana famakiana
Tsy misy mampilamina saina fa tsy tantara tsara, ary izany indrindra no ilainao amin'ny torimaso mahafinaritra eo amin'ny lamasinina. Mitondra ny magazine tianao indrindra, na boky amin'ny a fiaran-dalamby dia dia iray amin'ireo torohevitra tsara indrindra hatoriana amin'ny lamasinina.
Rehefa mamaky ny eritreritrao ianao dia mitety toerana hafa, toerana, ary manjavona ny ahiahin'ny tontolo andro. Ny famakiana tsara dia fanatanjahan-tena tsara, taking your mind off any meticulous details. For an hour or two, mihataka ianao, ary izay dia ampy hahatonga anao hatory sy hanonofy.
Eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra dia lavitra tsy hay hadinoina, miaraka amin'ny seza tsara indrindra sy ny taha tsara indrindra ho an'ny torimaso mahafinaritra eo amin'ny fiaran-dalamby.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “10 Torohevitra Fomba fatoriana amin'ny fiaran-dalamby” ao amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-how-sleep-on-train%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
BestTipsSleeponTrain matory sleeper SleeperTrainsEurope SleepOnATrain Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra